Mapisarema 82 - Bhaibheri Dzvene [Shona Bible 2009]
Mwari anomira paungano yaMwari; Anotonga pakati pavamwari.
"Muchatonga zvisina kururama kusvikira rinhiko, Muchisanangura vanhu vakaipa?
Tongerai mhaka dzavarombo nenherera; Ruramisirai vanotambudzika navanoshaiwa chose.
Sunungurai varombo navashaiwi Varwirei paruoko rwowakaipa."
Havazivi, havanzwisisi; Vanofamba-famba murima; Nheyo dzose dzapasi dzinozununguka.
Ndakati, "Muri vamwari, Mose muri vanakomana voWokumusorosoro.
Kunyange zvakadaro muchafa savanhu, Muchafa somumwe wamachinda."
Simukai Mwari, mutongere pasi; Nokuti ndudzi dzose dzichava nhaka yenyu.